Faallooyinka Ergayga Midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Jamhuuriyadda Somaliland midnimadu waa muhiim!!! | Hayaan News
Faallooyinka Ergayga Midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Jamhuuriyadda Somaliland midnimadu waa muhiim!!!
Somaliland waxay lumisay go ‘aankii madaxbanaanida, marka la barbardhigo sanado badan oo ay Somaliland Jamhuuriyadeeda ka mid ahayd, kana go’ antahay aqoonsi iyo dawlad cajiib ah geeska Afrika.
Laakiin waxaad moodaa in Somaliland xilkeedii sharafta lahaa ay meel gaar ah marayso, diidmo iyo xaqdhawr shacab oo aan ku salaysnayn.
Falanqaynta iyo dib u eegista ergayga midawga yurub ee ku saabsan arimaha somaliland ee qiimaynta dhabta ah sida jamhuriyada somaliland u maamusho si ay u gaadho marxalada dalabka iyo si guul leh u hirgalinta qorshayaasha istaraatiijiyadeed ee arimaha muhiimka ah.
Shenanigan iyo whataboutismka ee daboolida cabashoyinka iyo walaaca la xiriira duruufaha jira gebi ahaanba waa la inkirayaa. Mana jiro wax isku day ah oo lagu daaweynayo dhibaatooyinka ka jira deegaanada qaar.
Shacbigu wuxuu dilaacaa wado kasta oo guul iyo midnimo ku dhisan isdhexgalka saafi ah ee bulshada oo dhan xuquuq iyo awood qaybsi.
Dhibaatada ugu weyn ee Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo baxdaa saamiga khayraadka qaranka si siman bari ilaa galbeed.
Aqoonsiga Somaliland ee aasaasiga ah iyo baahiyaha aasaasiga ah ee talaabo talaabo dadkuna waxay ka fogaadaan xilkaas mayl iyo mayl kasta.
Runtu waa sida soo socota.
Jamhuuriyada Somaliland waxay heshay dhul qalalan oo cidlo ah oo aan awoodin inay hesho taageero dawladeed oo sadex sano ah.
Gaar ahaan deegaano aad u fog sida Buuhoodle, Badhan, Borama, Ceel Afweyn, Salaxley, Baligubadle, Oodweyne, Allaybaday iyo meelo badan oo dhaqaale xumo ah.
Ma jiro jir sharci ah oo go ‘ aamiya saami qaybsiga dhaqaalaha dalka ee dastuurkaas dayacan. Taasi waxay gabi ahaanba iftiiminaysaa midnimada iyo joogteynta wanaagsan ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Waa guul daro aad u xun in la beegsado qorshe aad u fiican oo lagu xallinayo saboolnimada ka jirta deegaanadaas kor ku xusan. Ololo waaweyn iyo kala qaybsanaan ayaa jaray silsiladii adkaa ee midnimada somaliland.
Beesha caalamku waxay ka falceliyaan dildilaacii sii waynaanaya ee Somaliland sii wanaagsan iyo sii wadid wanaagsan.
Wali jamhuriyada somaliland waxay heshay waqti aad u cajiib badan oo ay ku xoojiso kuna dayactirto dhawacyadii dhawaan dhacay
Inta ay dhamaatay qorsho siyaasadeed iyo olole guulo muhiim ah oo ay dowlada Somaliland ku wareejiso ama ay keento xukuumad wareersan oo ku bedelata qaraxyada qaraxyada.
Midnimada Jamhuriyada Somaliland waxay abuurtaa inkirid iyo kala fogaansho ganacsi iyo fursado siyaasadeed-taas oo gabi ahaanba Jamhuuriyada Somaliland ku cidhiidhi iyo guuldaro.
Dastuurkii la iloobay ee dhaqaale la ‘ aanta ahaa magac aan la aqoonsan karin ee Jamhuuriyadda Somaliland oo keliya.
Waxay umuuqataa dad kalsoni iyo aaminaad dib ugusoo laabatay oo ku nool meel aan wali haraad iyo gaajo u dhiman hantidhawrka dalka.
Muwaadiniinta waxay xaq iyo xaq u leeyihiin inay dawlada dhexe ka hor istaagaan qaybsiga khayraadka dalka.
Marqaati kale oo naxdin leh wuxuu muujinayaa in laxawgu hogaamiyo yeyda halka geesiyada adag ee ku nool geesiyada guud ahaanba loo diiday inay u adeegaan kana qayb qaataan nidaamka maamuuska iyo dib u habaynta xirfadaha iyo xirfadaha leh ee garoomada Somaliland ku jira meel kasta oo ay dhigtaan Jamhuuriyadda Somaliland. sano oo kale.
Jamhuuriyada Somaliland ilaa ay si xawli ah u hagaajiso oo ay dayactirto waxyeelada loo gaystay-dildilaacu wuu waynaadaa, mabda ‘ aasana waxaa lagu ridayaa laba rux oo xariga Wanka ah.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi caadi ahaan waan taageersanahay, laakiin waxay dhibaato ku tahay ka hadal qaran iyo cadaalad qaybsiga dhaqaalaha iyo awoodda dhaqaale.
Yeydu waa lax daba dhigtaa-ma jirto sabab lax u hogaamiso yeydu meel ay qarankan u geeyaan burbur iyo guuldaro mooyaane.
Hadii Midowga Yurub ee Soomaaliya uu faallo ka bixiyo in Jamhuuriyadda Somaliland ay daciifto dhawaan-waa xaqiiq. Lkn ogow waxa sababay oo dayactir ama ku tiirsanoow idaha madaxweynaha somaliland yeyda hordhigo geesiyaal ku nool aqoonsi iyo faa ‘ iido uleh falsafada iyo hal abuurka hogaaminta si uu ugu guulaysto wakhtiga.
Jamhuuriyada somaliland waa laandheere banaan degay oo ka baxaysa tareenka madaxbanaanida iyo madaxbanaanida dalka ee ku qaylinaya cadaalad sinaan iyo dimuqraadiyad qaybsiga khayraadka dawlada.
Xusuusnow, tiro badan oo ka mid ah dadka Somaliland ee ku dhaqan xaalad abaareed iyo xiliyada qalalan iyo jidhka sharci dejinta marna kama doodaan kor u qaadida adeegyada aasaasiga ah ee shacabka si xushmad leh.
Jamhuuriyada somaliland waxa isku duubni ah in ay aragti dheertahay iyo inkale.
Hana la yaabin faallooyinka ergayga midawga yurub u qaabilsan Somaliland, mararka qaar dhaleecayntu waxay dhaleecaysaa qaran dhiirigelin iyo xawaare ku socota kala saarista dhibaatada.
Shacabka jamhuuriyada somaliland waxay ku noolyihiin deegaano kala duwan iyo xaalad kala duwan oo mudan in la tixgaliyo meel kasta oo gaar ah lana siiyo xaqsoorka khayraadka dalka.
Dhaqankaas dhawrsoon ee siyaasadu wuxuu umad siyaa isdhexgalka, aaminaadda, runta iyo aqbalaadda waaritaanka joogtada ah.
Dawladnimadu waxay la macno tahay wax wadaagis iyo aftahanimo ayay ka baxday, madax wayne indhahaaguna way qabtaan.
Xalka kaliya wuxuu u muuqdaa in aynu wadaagno ama kala tagno.
Waxaan rajaynayaa in dhibatada iyo xumantu ay aqoonsadaan dhibaato kasta lana kala saaro si ay u ilaaliyaan mabda ‘ a iyo aaminaad qaran ahaan mustaqbalka.
Hadaljeedinta ergayga midowga yurub waxay ahayd mid ku haboon in Somaliland ay falanqayso, qiimayso oo kor u qaado mabda ‘ a.
Xumaan kasta oo ka dhan ah Jamhuriyada Somaliland kooxdayadu diidaan oo dalka difaacaan, laakiin waxaa suura gal ah markii ilays qalday in la muujiyo dhamaan tunnel-ka oo dhan, si fudud qiil looguma siin kartid been abuurka, ka dhamaada.
Madaxweyne biixi sharafta iyo karaamada leh waa inuu iska ilaaliyaa in uu yeyda horteeda idaha ku dhex dhigo.
Si kale haddii loo dhigo morons ka hor imaada rabitaanka waa mid aad u xun oo xal u ah himilada iyo hamiga jamuuriyada somaliland.
Goodwill Ambassadorka jamhuuriyada somaliland.